पेरिस भनेर हनिमून मनाउन यो ठाउँमा गएका थिए शाहरुख खान, खुलाए आफैले त्यो क्षण – Sapana Sanjal
पेरिस भनेर हनिमून मनाउन यो ठाउँमा गएका थिए शाहरुख खान, खुलाए आफैले त्यो क्षण
May 16, 2021 121
काठमाडौं । भारतीय अभिनेता शाहरुख र गौरी खानको जोडी निकै चर्चित जोडी हो । दुवैले आफ्नो प्रेमका लागि परिवारसँग संघर्ष गरेका थिए । अन्ततः उनीहरुले परिवारले पनि उनीहरुको प्रेमलाई स्वीकार गरेका थिए । ८ अक्टुबर १९७० मा जन्मिएकी गौरी खानको बिहीबार जन्मदिन हो । गौरी ५० बर्षकी भएकी छन्।
सन् १९९१ मा यी दुईको बीचमा विवाह भएको थियो । शाहरुखले गौरीका परिवारलाई मनाउनका लागि ५ वर्षसम्म हिन्दू भएको नाटक गरेका थिए । उनले आफ्नो नाम पनि परिवर्तन गरेका थिए । यतिमात्र होइन, उनले विवाहपछि पनि गौरी एक झुट बोलेका थिए, उनले भर्खरै उक्त झुटको खुलासा पनि गरेका छन् ।
एक अवार्ड शोको क्रममा शाहरुख खानले आफ्नो हनिमूनको एक गोप्य कुरा शेयर गरेका थिए । गौरी र शाहरुखको बीचमा हनुमून पेरिस जाने सहमति भएको थियो तर शाहरुखसँग त्यसका लागि पर्याप्त पैसा थिएन । यस्तोमा उनले हनिमूनका लागि दार्जिलिङ लगेका थिए ।
शाहरुख सन् १९९१ मा गौरीका परिवारलाई मनाउन सफल भए । शाहरुखका अनुसार गौरी उनलाई यसकारण प्रेम गर्छिन् कि उनी निकै इमान्दार छन् ।
Prevसरकारद्वारा एक हजार सिलिण्डर फिर्ता
Nextपाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, जेष्ठ ३ गते सोमबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
त्रिवि अंग्रेजी विभागका उपप्राध्यापक सुवेदीको निधन
हे भगवान् ! दुबै हात नभएको बच्चा जन्मियो ,डाक्टर नै परे चकित ,दर्जि र बाहुनिको बच्चा यस्तो (हेर्नुस् भिडियो )
एउटा प्रहरी सडकमा धरधरी रुँदै भन्छन्, माइजुको बहिनी विवाह गरेको हुँ तर मेरो जिवन सबै भताभुंग भयो (भिडियो)
कोरोना संक्रमण उच्च बढेपछि सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने तयारी
खोकी र ज्वरोभन्दा पनि यी दुई लक्षण देखुनु को-रोनाको स्पष्ट लक्षण हो, कस्ताे छ त तपाईहरुकाे स्वास्थ ? (722)
बुवाको कम्मरको भाग पुरै कु`हिएको छ ,छोरिहरुले ओछ्यानमै दिशा पिसाब गराउछन् ,यतिसम्म गर्छन्,कठै बिचरा (हेर्नुस् भिडियो ) (632)
हड्डि र छाला मात्रै बाकि छ ,यी १४ बर्षिय बाबुलाई यो के भयो यस्तो ,कठै (हेर्नुस् भिडियो ) (593)
यी महान श्रीमान जसले आफ्नो श्रीमतीको खुसि फर्काएरै छाडे – विनोद र अनिता खड्काको वैवाहिक वर्षगाँठ सबैको मायाले मृत्युको मुखबाट फर्किएकी अनिताले आफैं काटिन केक फर्कियो खुशी (भिडियो) (537)